फेरि उही ठाकठुक - Khabar Break | Khabar Break
काठमाडौं : १३ साउनको बैठकलाई हेर्ने सवाल
ओली : तपाईंहरूले १३ गते आयोजना गरेको भेलालाई किन बैठक भन्नुभयो ?
दाहाल : त्यो बैठक नै हो। त्यसले विधिविपरीत स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको सूचना तपाईंको तर्फबाट प्रसारित गर्नु उचित थिएन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
ओली : म नभएको बेला बैठक बस्ने ? अनि मेराविरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्ने ? त्यो बैठक हुनै सक्दैन। त्यसलाई म मान्दिनँ।
दाहाल : तपाईं चाहिँ एक्लै विधिविपरीत बैठक रोक्ने ? अनि बैठक पनि हामीले नगर्ने भन्ने हुन्छ ?
ओली : त्यस्तो हुन्न। त्यसलाई मानिँदैन। तपाईंहरूको गुट बैठक बसेर गरेको निर्णय म मान्दिनँ।
ओलीको राजीनामाको प्रसंग
प्रचण्ड : मंसिर ४ देखि वैशाख २० सम्मको बैठकका कुरामा कमजोरी स्वीकार गर्ने र रूपान्तरण भएर जाने कुरा थिए। तर त्यो व्यवहारमा देखिएन। विषय फरक ढंगले आयो। अब नेतृत्व बदल्ने कुरा नै सही हुन्छ पार्टी र सरकार बचाउन। दुईमध्ये एक पद छोड्नुस्। स्वेच्छाले छोडिदिनुस्, कुन मन लाग्छ, त्यही। तपाईंले निकास दिनुस्।
ओली : त्यो कुरै नगर्नुस्। मैले अहिले कुनै पद छाड्न मिल्दैन। बरु महाधिवेशन छिटो गरौं। त्यसमा नै छलफल गरौं।
प्रचण्ड : प्रधानमन्त्री छोड्नुस् भन्ने हाम्रो मुख्य करा हो। तर तपाईंलाई त्यो छोडन गाह्रो छ भने दुईमध्ये एक पद छोड्नुस्।
ओली : म कुनै पनि पद छोड्दिनँ। यसमा म अहिले बहस नै गर्न चाहान्नँ। छोड्ने कुरा पनि केही छैन।
अब बैठक के ? स्थायी कि सचिवालय ?
ओली : पार्टी कमिटीबाटै छलफल गर्न म पनि तयार छु। कमिटीबाटै बैठक अगाडि लैजाऔं। छलफल गरौं।
प्रचण्ड : स्थायी कमिटी बैठक एजेन्डामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि बोलाऔं। विधिमा सहमति जनाऔं। सहमति भए सहमतिको, नभए आ–आफ्नो मत लिएर पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा जाऔं। त्यहीं बहुमतले पास गरौं। त्यसपछि महाधिवेशनमा जाऔंला।
ओली : पहिला सचिवालयमा ठोस सहमति भएपछि मात्रै स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जान सकिन्छ। तर अब त्यो पनि आवश्यक छैन। सचिवालयको साउन ३ को सहमतिअनुसार प्रस्ताव तयार पारौं, खाका बनाऔं। महाधिवेशन गर्ने गरी अगाडि बढौं।
दाहाल : महाधिवेशनमा जाने कुरामा हाम्रो पनि असहमति छैन। तर पहिले तत्कालका लागि तपाईंले निकास दिनुस्।
बैठकमा १३ साउनमा दाहालको अध्यक्षतामा बालुवाटारमै बसेको बैठकलाई पार्टी बैठक भन्ने कि गुटको भेला भन्नेमा केहीबेर दुई अध्यक्षबीच भनाभन भएको थियो। दाहालले स्वेच्छाले एउटा पदबाट राजीनामा दिन ओलीलाई आइतबार पनि आग्रह गरेका थिए। ओलीले अहिले कुनै पद नछाड्ने बरु महाधिवेशन छिटो गरेर नेतृत्व सहज हस्तान्तरण गर्नै पुरानै कुरामा अड्डी लिएका थिए।बैठक सचिवालय बोलाउने या स्थायी समिति भन्नेमा पनि ओली दाहालका आ–आफ्नै मत थिए। ‘बैठक बस्ने विषयमा सहमति छ। उहाँ (प्रधानमन्त्री) को जोड सचिवालय बोलाउने भन्नेतिर छ। हाम्रो जोड स्थायी समितिको बैठकलाई छलफल गरी टुंग्याऔं भन्नेतिर छ। सहमतिको विकल्प भने छैन’, वरिष्ठ नेता खनालले भने।
नेम्बाङले भने संवाद सुरु भएको र सोमबार फेरि हुने छलफलले सम्भवतः एउटा निकास पहिल्याउने बताए। ‘दुई अध्यक्षको संवाद नै हुन नसकिरहेका बेला संवाद भएको छ। त्यो पनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो। सबै विषयमा कुराकानी भए। अब झिनामसिना कुरामा नलाग्ने, वार्ता र संवादबाटै सहमति खोज्ने कुरा भएको छ। भोलि (सोमबार) ९ बजे फेरि बस्ने कुरा छ’, नेम्बाङले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘आजै (आइतबार) निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफलमा जुटेका थियौं, अब फेरि भोलि जेरी खाँदै बसेर भरसक टुंग्याउने गरी जान्छ होला।’
दुई अध्यक्षको छलफलमा ओलीले त्यही जगमा टेकेर सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले अनुकूल वातावरण पनि बनेको छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव ओलीका लागि अनुकूल हुने गरी ल्याएका छन्। यसले सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने ओलीको ठम्याइँ छ। त्यही कारण उनी सचिवालय बैठक चाहन्छन्।
दाहाल–नेपाल पक्षले भने स्थायी समिति बैठक बोलाउने, त्यसमा रहेका पूर्वनिर्धारित एजेन्डामा छलफल गराउने र सहमति भए सहमितको नभए आ–आफ्नो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजाने गरी जान चाहेको छ। केन्द्रीय समिति बोलाउन १ सय ५२ नेताको हस्ताक्षरसहित लिखित मागपत्र समेत बुझाइसकेको छ। आइतबारको बैठक यिनै विषयमा केन्द्रित भए पनि निचोड निस्कन सकेन। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।